1.Didn't mahita izay ilainao?
Toy ny fijanonana tontonana mpamatsy vahaolana, dia mbola hanitarana ny vokatra sokajy fa dingana hentitra isika mba hanaiky ny vokatra vaovao mba hanampy an-lisitra. Ary mitaky fotoana mba handefa entana an-tserasera. Afaka Lazao anay fa nanontany, ary jereo raha afaka manome.
2.You no tena vaovao na vokatra manokana?
manana mafy R & D fahafahana sy mitsapa antsika azafady. Faly izahay ampanjifaina vokatra ho anareo.
3.What raha be wholesaler?
Manana ny lisitry ny VIP mpanjifa. Contact us mba hijery raha afaka hihaona ny VIP fenitra. VIP mpanjifa afaka mankafy be dia be ny tarehy politika.
4.How ela no mitarika ny fotoana?
2-4 herinandro teo petra-bola. Raha nitranga ny manana semi-vita amin'ny tahiry, ny mpitarika dia ho fohy ny fotoana, raha tsy manana tahiry, ny tari-dalan'ny fotoana dia matetika ao anatin'ny 15 andro, ary koa araka ny be ny filaminana.
5.What ny fandoavam-bola teny?
T / T petra-bola + fifandanjana eo dika mitovy B / L, na 100% L / C amin'ny fahitana
Mifandray mivantana fotsiny izahay. Faly izahay hamaly ny fanontaniana rehetra.
7.Are ny santionany misy?
Eny, ny santionany dia maimaim-poana sy ny entana ho anjara-raharaha ao amin'ny lafiny nangonina. Fa araka ny lamin hamafisina, izany entana azo nakòn anjara-raharahany avy amin'ny fandoavam-bola rehetra na santionany iray hafa izay mila azo nalefa tany aminao amin'ny manaraka sy ny anjara-raharaha entana dia nandoa noho ny lafiny.
PVC haingon-trano Sheet, PVC Wall Panel, Composite Plywood, Best Price Commercial gitara, Film niatrika Shuttering gitara, Plywood Exporter,